Dallada isku xidhka iyo wacyigelinta dhalinayrada Somaliland ee SYNA Oo Munaasabad u qabatay 37 arday oo Deeq waxbarasho 50% Laga Bixinayao Jaamacada+SAWIRO
Friday June, 22 2018 - 04:16:43
Saturday January 13, 2018 - 18:32:07 in by salman abdi
Dallada isku xidhka iyo wacyigelinta dhalinayrada Somaliland eeSYNAayaa xalay hotel Deero ee magaalda Burco ku qabatay munaasabad loo qabtay arday gaadhaysa 37 arday oo dallada SYNA siisay deeq waxbarasho 50% laga bixinayo Fiiga Jaamacada.
Ardaydaas oo dhamaantoodba ah ardayda danyarta ah ee ku dhaqan gudaha magaalda Burco ee awoodi wayay in ay waxbarashadooda jaamacadeed sii wataan.
waxaana deeqdan wax barasho dallada SYNA kala shaqaysay oo ay isla kaashadeen Jaamacada ALPHA Qaybteeda Burco.
Munasabadaas oo ay kasoo qaybgaleen Maamulka Jaamacada Alpha, waalidiintii dhashay ardaydaas, masuuliyiin ka socday shirkadaha gaarka ah, iyo wasaarada waxbarashada ee gobolka togdheer.
ugu horayntii waxaa munaasabaas ka hadlay gudoomiyaha Dallada SYNA Eng Mohamed Dooyaale ooo ku dheeraaday dallada SYNA iyo waxyaabaha ay ka shaqayso, sidoo kalena xusay waxyaabihii uurkooda ku kalifay in ay deeqdan waxbarasho siiyaan dadka danyarta ah ee gobolka togdheer.
dhanka kale isaguna munaasabaas ka hadlay gudoomiyaha Jaamacada ALPHA faraceda burco Mudane Cabdiqani oo aad ugu dheeraday sida ka jaamacad ahaan ay uga go’antahay in ay wax ku soo celiyaan bulshada danyarta ah ee aan awoodin in ay iska bixiyaan kharashaadka jaamacada. waxaanu gudoomiye Abdiqani Xusay in ay dallada SYNA sigaar ah ula shaqeeyaan oo ay uga soocantahay ururada ka howlgala gobolka togdheer, isagoo carabka ku dhuftay in ka maamul ahaan ay 37 arday jaamacada inta ay ka dhamaynayaan oo dhan jaamacadu ka qadi doonto oo kaliya 50% kuliyada uu doorto ardaygu.
waxaana xalkaasi ka hadlyay masuuliyiin ka tirsan dalada SYNA iyo goobjoogayaal ajaaniba iyo weliba shirkadaha gaarka loo leeyahayba ah.
Gabagabadii waxaa munaasabada soo afmeeray kormeere sare oo ka tirsan wasaarada waxbarashada gobolka Togdheer mudane Xasan Maxamed isagoo aad ugu dheeraaday dhiirigalin uu usoo jeediyey dallada SYNA iyo dardaarad aad u qoto dheer oo uu siiyey ardaydii 37 ka gaadhayey ee munaasabadaas loo qabtay.
waxaana halkaasi Gudoomiyaha jaamcada ALPHA logu wareejiyey liiska 37 arday ee ka faaiidaysatay deeqdii wax barasho kuwaas oo 50 % ka mid ah fiiga jamacada dallada SYNA iyo Jamacada alpha ka bixin doonaan.